တောင်ငူသား: August 2008
လူတိုင်း ကဖူးကြလားတော့ ကျွန်တော်မသိနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့လည်း အတော်ကို ဝါသနာကြီးကြတယ်။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုကတည်းက ဘဝဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ဇာတ်ဆရာအလိုကျ ကြိုးဆွဲရာကကြရတာ မဟုတ်လား။ အူဝဲလေးကနေ သိတတ်စအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ပဲ မိဘဆွေမျိုးတွေကနေ အကသင်ပေးတတ်ကြတယ်။ ချိုမိုင်မိုင် တဲ့လေ။ လက်သီးလေးကို ဆုပ်လိုက်ဖြန့်လိုက်လုပ်ပြီး ကလေးပိစိလေးကို ကခိုင်းကြတယ်။ လက်ကလေးတွေ သန်မာကြံ့ခိုင်အောင် လှုပ်ရှားမှုရအောင် လေ့ကျင့်ခန်းသဘောမျိုးလည်းဖြစ်တာပေါ့။ ကလေးက လိုက်လုပ်နိုင်လေ လူကြီးတွေက ပိုချော့မြူလေပဲ။ ကျွန်တော်ထင်မိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေဟာ ဘဝမှာ အစောဆုံးကဖြစ်တဲ့သူတွေများ ဖြစ်မလားလို့လေ။
လမ်းလေးစမ်းလျှောက်စ ပြုလာတော့ တစ်ခါ ရပ်နိုင်ပေ့ဆိုပြီး လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီး ခြေစမ်းအက ကခိုင်းပြန်တယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ကောင်းကောင်းလမ်းလျှောက်နိုင် ဆော့ကစားနိုင်တဲ့အရွယ် ရောက်လာပြီဆိုရင် တစ်ချို့ကလေးတွေဟာ သီချင်းတွေ တီးလုံးတွေနဲ့ ခုန်ပေါက်မြူးထူးပြီး ကတတ်လာတယ်။ တစ်ချို့တော့လည်း စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ ဒီထက်ပိုဝါသနာပါတဲ့ ကလေးတွေကတော့ ကွေးနေအောင်ကတတ်တဲ့ သူလေးတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်အပါအဝင်ပေါ့။
ကျွန်တော့်အမေဖက်က အဒေါ်အပျိုကြီးတွေက အထည်ဆိုင်ဖွင့်တော့ ဇာပိတ်စလေးတွေ လက်လက်ထတဲ့ ပိတ်လေးတွေ ကျန်ရင် ဦးလေးလူပျိုကြီး အကျီင်္ချုပ်တာဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် မင်းသားဝတ်စုံလေး ချုပ်ပေးထားတယ်။ အိမ်နားက အဘွားက ခေါင်းချိုးခြေချိုးလေ နည်းနည်းသင်ပေးထားတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ ကချင်နေတတ်တယ်။ ကျွန်တော့်ဦးလေး ဆီမှာ sound box အကြီးကြီးတစ်လုံးလည်းရှိတယ်။ သူဖွင့်လေ့ရှိတဲ့သီချင်းတွေထဲမှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက “တစ်ပင်တိုင် မင်းသားကြီး” ဆိုတဲ့သီချင်းပဲ။ ဘယ်သူဆိုလဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အိမ်လည်ထွက်ဆော့ပြီး အချိန်တန်လို့ အိမ်ပြန်မလာသေးရင် အမေက ဘယ်တော့မှလိုက်မခေါ်ပါဘူး။ ဦးလေးကို သီချင်းဖွင့်ခိုင်းလိုက်တာပဲ။ sound box ကနေ-
ဆိုတဲ့ သီချင်းသံထွက်လာတာနဲ့ ရောက်ရာအရပ်ကနေ အိမ်တန်းပြန်ပြီး မင်းသားဝတ်စုံလေးကောက်ဝတ်ပြီး ကွေးနေအောင်ကတော့တာပဲ။
မူကြိုတက်တော့ ခြံကြီးထဲက မေတ္တာမွန်မူကြိုမှာ။ အဲဒီတုန်းက မေတ္တာမွန်မူကြိုက ကလေးတွေကို ကျောင်းကပွဲတွေ အားကစားပွဲတွေကို နှစ်တိုင်းလုပ်ပေးတယ်။ စင်ကြီးထိုးပြီး ကလေးတွေ သရုပ်ဖော်ကကြတာပေါ့။ အရမ်းလည်းစည်တဲ့အပြင် ကလေးတွေရော ကလေးမိဘတွေပါ ပျော်ကြရပါတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီမူကြိုမှာ နှစ်နှစ်နေပါတယ်။ တစ်နှစ်မှာ နှစ်ပါးသွားအကလေးနဲ့ ပွဲထုတ်ဖို့ လူရွေးတယ်။ မူကြိုမှာ အိမ်နားက ကျွန်တော်အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူက မင်းသမီးနေရာက ကရမယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကတတ်တော့ မင်းသားလုပ်ချင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပိုကတတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပဲ ရွေးလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းထဲက စိတ်နာသွားမိလား မပြောတတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လုံးဝမကဖြစ်တော့ပါဘူး။
ပြည်မှာကျောင်းတက်နေတုန်း ပဉ္စမနှစ်ရောက်တော့ အတန်းထဲက သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး တစ်ရက်ခရီးတိုလေးထွက်ဖို့ စီစဉ်ကြတယ်။ တောင်တွင်းကြီးသားက သူတို့မြို့ကို အချက်အလက်နဲ့ အဆိုပြုတာကြောင့် အားလုံးသဘောကျပြီး ရွေးလိုက်ကြတယ်။ ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်းရယ်၊ ဘုရားတွေရယ်စုံအောင်ဖူးပြီး နောက်ဆုံး နတ်မှီကျောင်းမှာ နားကြတယ်။ အဲဒီမှာပဲ နေရာကျယ်ဝန်းတာကြောင့် ဂိမ်းဆော့ကြတယ်။ ခရီးအတွက် အခြားကိစ္စတွေတော့ ဝိုင်းလုပ်ကြပြီး ဂိမ်းဆော့ဖို့တာဝန်ကို ကျွန်တော့်ခေါင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်ကြတယ်။ ဘယ်ရမလဲ။ ဂိမ်းမာစတာလုပ်ပြီး ကတ်သီးကတ်သတ်ကစားနည်းတွေနဲ့ ချောက်ချလိုက်တာ အားလုံးမောရောပဲ။ ဆော့လို့မောသွားကြတော့မှ တစ်စခန်းထကြတယ်။ ဦးဆောင်တဲ့သူတွေက တစ်လှည့်ဖျော်ဖြေရမတဲ့လေ။ တစ်ယောက်က ကံကောင်းပြီး စောစောစီးစီးထွက်လိုက်လို့ ဂစ်တာတီးသီချင်းဆိုရုံနဲ့ ပြီးသွားတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ “ကိုယ်ကလည်း ချစ်မိနေပြီ” သီချင်းနဲ့ သူကြိတ်ပိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးရှေ့မှာ အမူအရာနဲ့ ဖျော်ဖြေသွားရတယ်။ သူကတော့ အမြတ်ထွက်သွားတာပေါ့။ နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ နည်းနည်းအရှိန်ရလာပြီ။ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုရဲ့ “လာမယ့်နှစ်မှာ ရည်းစားထားမယ်” ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ ခါးလေးလှုပ် လမ်းလေးလျှောက်ပြပြီး ကရတာ ပွဲကိုကျလို့ပဲ။ နောက်ဆုံးအလှည့်ကျတော့ ကျွန်တော်အတန်တန်ငြင်းနေပေမယ့် မရတော့ဘူး။ အရှိန်က မြင့်နေပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကတ်သီးကတ်သတ်ဂိမ်းတွေကို သူတို့က ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆော့ရတယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ဆိုပေးတဲ့ သီချင်းနဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ ပြန်ကပြရမယ်တဲ့လေ။ ကောင်းရော။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်ဆုံးအကကို ၆၀ ကျော်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှေ့ တောင်တွင်းကြီးမြို့တစ်နေရာမှာ တင်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ ခုထိ ကြုံကြိုက်တိုင်း မှတ်မိနေကြတုန်း။ အသည်းနှလုံးဆိုတဲ့ စာသားလေးနားရောက်ရင် လက်ညိုးနှစ်ချောင်းနဲ့ လက်မနှစ်ချောင်းကို ဝိုက်ပြီး အသည်းပုံလေးဖော် ကတာကို သဘောတွေကျကြလေရဲ့။ အားပေးကြတာတော့ ဝက်ဝက်ကွဲပဲ။ သူတို့ဆိုပေးတဲ့သီချင်းက ဘာတဲ့။ ပိုးဒါလီသိန်းတန်ရဲ့သီချင်း-
“ကိုကို ယောက်ျားမဟုတ်ဘူး ” တဲ့ဗျာ။
Posted by Taungoo at 10:19 AM comments (4)
Posted by Taungoo at 8:45 PM comments (12)
Links to this post Labels: ကိုယ်ပိုင်ဟာသ , ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ , တက္ကသိုလ် , တောင်ငူ
Posted by Taungoo at 1:19 PM comments (5)
ဆရာတော်အရှင်မြတ်များ ဟောကြားတော်မူသော တရားပွဲများကို ငယ်စဉ်က လူကြီးမိဘများနှင့် လိုက်သွားဖူးသော်လည်း မှတ်မှတ်သားသားမရှိခဲ့ဖူးပါ။ အခြေခံပညာအထက်တန်း(၁၀ တန်း)စာမေးပွဲ ဖြေပြီးသောအခါတွင်မှ ကျွန်တော့်စိတ်ဆန္ဒအလျောက် သွားရောက်နာယူခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြို့မှာတော့ တရားပွဲများကို ဘုရားတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ ဓမ္မာရုံတွေမှာသာ ဆင်ယင်ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျယ်ဝန်းသော နေရာများမှာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဓမ္မကထိကဆရာတော်ရှေ့မှောက်မှာ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း နာကြားရလို့ တရားတော်ကို ပိုမိုအာရုံရောက်ပါတယ်။
တလောက ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒတရားပွဲ Choa Chu Kan က ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျင်းပပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီမနက်မှာ မက်ဆေ့ခ်ျရလို့ သွားရောက်နာယူဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်ကြေငြာထားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဓမ္မာရုံအပေါ်ထပ်နဲ့ ပရိတ်သတ်အင်အားဟာ အနေတော်ပါပဲ။ တရားပွဲမှာ ဆရာတော်တရားဟောနေတုန်း တီးလုံးသံထွက်လာပြီုး လူတစ်ယောက်ဆီက ဖုန်းသံထမြည်ပါတယ်။ တော်နေပြန်တော့ တစ်ခါ “ရွှီ... Taxi" ဆိုတဲ့ အသံမြည်ပြန်ရော။ မက်ဆေ့ခ်ျဝင်တာလေ။ ခဏနေပြန်တော့ ပိုဆိုးသွားတယ် “ကိုကိုဖုန်းလာတယ် ကိုကိုရေ ဖုန်းလာနေတယ် ကိုကိုဖုန်းလာတယ်ဆို ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး အမြင်ကပ်စရာကြီး" ဆိုပြီး ဘာညာသရကာနဲ့ ညုတုတုသံက ထပ်ထွက်လာပါတယ်။ ဘယ်လောက်များ ဆိုးဝါးလိုက်ပါသလဲဗျာ တရားပွဲမှာ။ ပထမတစ်ဦးဆီက အသံထွက်ရင်ကိုပဲ ကြားမိတဲ့လူတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေကို အသံတိတ်လုပ်လိုက်သင့်ပါပြီ။ ဖုန်းတိုင်းတိုင်းလိုလိုမှာ ဖုန်းလာရင် တုန်ခါပြီး အချက်ပေးတဲ့ စနစ်တွေ ပါကြမှာပါ။ ဖုန်းလာစရာရှိလို့ မသိလိုက်မှာစိုးလို့ပါ ဆိုရင်လည်း တရားပွဲမလာခဲ့တာက ပိုအဆင်ပြေပါဦးမယ်။ အဲဒီစိတ်နဲ့ဆိုရင်လည်း အာရုံရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုတော့ ဆရာတော်ကို အင်မတန်အားနာဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဘေးကတရားနာပရိတ်သတ်တွေကိုလည်း အင်မတန် စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
ပွဲလမ်းသဘင် အခမ်းအနားတွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာတောင် လူမှုရေးအရ ဖုန်းသံကို အသံတိတ်ပေးထားရသေးတာပဲ။ အခုတရားပွဲမှာ ပိုပြီးတောင် ဂရုတစိုက် လုပ်ရမှာပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ စကားပြောနေတုန်း အခြားလူတွေရဲ့ ဖုန်းတွေကနေ ဖုန်းသံတွေ အဲဒီလိုထွက်ထွက်လာရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်။ ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူနေအိမ်တွေရှိတဲ့အတွက် အသံချဲ့စက်ကနေ သိပ်မကျယ်ထားတာကြောင့် အာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်နောက်နားက အမျိုးသမီးမျိုးကို သူမဘေးက အမျိုးသားက ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကိုပဲ ပြန်ပြန်ပြောပြနေပါသေးတယ်။ အမျိုးသမီးအတွက် ဘယ်အရာက အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ မြန်မာလိုဟောတဲ့တရားကို မြန်မာလို ပြန်ပြောပြနေလည်းတော့ မသိပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအတွက်တော့ ကကျိကကျိအသံက နားစိုက်ထောင်နေတဲ့ တရားမှာ အာရုံပျက်ရပါတယ်။ ရန်ကုန် ကျောက်မြောင်းမှာတုန်းကတော့ လမ်းအသီးသီးက ဓမ္မသဘင်တွေကို ကိုယ့်လမ်းထဲမှာပဲ စုပေါင်းကျင်းပကြပါတယ်။ လမ်းတွေက အလျားရှည်ပေမယ့် သိပ်မကျယ်တော့ တရားဟောပလ္လင်ရှေ့မှာ တရားနာပရိတ်သတ် အစုအဝေးဟာ တနံတလျား ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါမှာတော့ ဓမ္မစိန္တာလမ်းမှာ ကျင်းပတဲ့ တရားပွဲတစ်ခုမှာ ရုံးကအပြန်နောက်ကျလို့ နောက်နားမှာပဲ နေရာရပါတယ်။ ကျွန်တော့်နောက်နားမှာ ထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဟာ ဆရာတော် မကြွခင်ကတည်းက စကားဖောင်ဖွဲ့နေလိုက်ကြတာ ဆရာတော်ကြွပြီး သီလပေးတုန်းအခိုက်ပဲ တိတ်သွားတယ်။ တရားဟောနေတုန်းလည်း စကားအမျှင်မပြတ်နိုင်ဘူး။ ဒေါသတကြီးတွေလည်း ပြောရဲ့။ ဒီလောက်တောင် ပြောဆိုဖို့ရှိနေကြရင်လည်း အိမ်မှာပြောကြပါတော့လား။ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တဲ့ အပြုအမူတွေပါ။
ဒီလိုလူမျိုးတွေ တောင်ငူက ဓမ္မကထိက ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ တွေ့ရင်တော့ မလွယ်ဘူးသာမှတ်ပေတော့။ ကျွန်တော့်မေမေဖက်က ဆွေမျိုးစုတွေ ဆည်းကပ်ကြတဲ့ ဆရာတော်ကြီးဟာ တရားဟော အင်မတန်မွေ့လျော်သလို တရားဟော အလွန်ကောင်းပါတယ်။ တရားဟောရာမှာလည်း ရှည်ရှည်ကြာကြာ ဟောလေ့ရှိပါတယ်။ တရားပွဲချည်းသက်သက်မှာတော့ တရားရှည်တာ အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် ဆွမ်းကျွေး အလှူအတန်းများမှာ ရေစက်ချတရားနာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အကြောင်းသိ တပည့်တကာရင်းတွေက ဆရာတော်ကို တရားတိုတိုဟောပါဘုရားလို့ ကြိုတင်တောင်းပန် လျှောက်ထားရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွေးမွေးဧည့်ခံရဦးမှာဆိုတော့ တရားနာရတာ စိတ်မဖြောင့်နိုင်ဘူးလေ။ တရားပွဲသီးသန့်ကျင်းပရင်တော့ ဆရာတော်ကြီးက စိတ်ကြိုက်ဟောတော့တာပဲ။
ဆရာတော်ကြီးသီတင်းသုံး ကျောင်းထိုင်ရာ ကျောင်းတိုက်က လူနေရပ်ကွက်တွေနဲ့ လမ်းပဲခြားတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအားလုံးလိုလိုဟာလည်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တပည့်တကာတွေချည်းပဲလေ။ ဥပုသ်နေ့တွေမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ နေ့ခင်းပိုင်းမှာ ဆရာတော်ကြီးက တရားဟောလေ့ရှိတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမလာနိုင်တဲ့သူတွေလည်း နာယူနိုင်အောင် တရားဟောရင် အော်လံကြီးကို ရပ်ကွက်ရှိရာဖက်ကို လှည့်ထားလေ့ရှိတယ်။ နေ့လယ် ထမင်းစားပြီးခါစဆိုတော့ တရားနာ ပရိတ်သတ်တချို့လည်း အိပ်ငိုက်မိတာပေါ့။ တရားဟော ပလ္လင်ထက်ကနေ ပရိတ်သတ်အားလုံးကို မြင်နေရတဲ့အတွက် အိပ်ငိုက်တာ မြင်ရင်တော့ မိုက်ခွက်ကနေ "ဟဲ့ တကာမောင်ထိုက် ဘာလို့ငိုက်နေတုန်း" ဆိုပြီး မိုက်ခွက်ကြီးနဲ့ အော်တော့တာပဲ။ ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းကို သိတဲ့ တပည့်တကာတွေဟာ တရားပွဲမှာ အိပ်မငိုက်ရဲတော့ပါဘူး။ နို့မို့ဆိုရင် ကိုယ်အိပ်ငိုက်တာကို တစ်ရပ်ကွက်လုံးသိကုန်မှာကိုး။ နာမည်ကြီး တပ်ပြီးအော်တာဆိုတော့လေ။ ငယ်ဆရာဆိုတော့လည်း ကြောက်ရတယ်။
အခုဒီလိုလူမျိုးတွေသာ ဆရာတော်ကြီးတရားပွဲနဲ့ ကြုံလို့ကတော့
"ဟဲ့ တကာ မောင်လုံး မင့်ဖုန်းကို ပိတ်ထားလိုက်ပါကွယ်"
"ဟဲ့ တကာမ မထားနဲ့ မကြွား စကားမများစမ်းနဲ့ကွယ်"
"ဟဲ့ ဘယ်သူတုန်း တရားပွဲမှာ ကိုကိုဆိုတဲ့ တကာလေးကို တကြော်ကြော်အော်ခေါ်နေတာ" ဆိုပြီး မိုက်ခွက်ကြီးနဲ့ အော်ထည့်လိုက်လို့ကတော့.............
Posted by Taungoo at 12:05 AM comments (3)
Links to this post Labels: ဘာသာရေး၊ ကုသိုလ်ရေး
Posted by Taungoo at 9:11 PM comments (4)
Links to this post Labels: တက္ကသိုလ်
ပြည်မြို့နား တဖြည်းဖြည်းနီးလာတဲ့ တစ်နေရာအရောက်မှာတော့ ရုတ်တရက် ဟေးကနဲ အော်မိကြပါတော့တယ်။ "ဧရာဝတီ"။ ဧရာဝတီရဲ့ အားမာန်အပြည့်နဲ့ စီးဆင်းနေတဲ့ ရေအလျဉ်ကို မြင်လိုက်ရတာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်တွေ လန်းဆန်းတက်ကြွသွားခဲ့ကြတယ်။ စစ်တောင်းမြစ်ရဲ့ အနောက်ဖက်ကမ်းသားတွေဟာ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ အရှေ့ဖက်ကမ်းပေါ်မှာ ခြေချမိခဲ့ကြပြီ။ နဝဒေးတံတားကြီးအောက်က ဖြတ်ပြီးမကြာခင်မှာ မြို့တွင်းကိုရောက်ပါတယ်။ မြို့လယ်တည့်တည့်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ကို အားမာန်အပြည့်နဲ့ ကြိုနေသယောင် "ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ်ကြီး" က မြင့်မြင့်မားမား ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွား။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒိုင်နာကားဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းအတိုင်း မောင်းလာပြီး ပြည်ရွှေဆံတော်ဘုရား မြောက်ဖက်မုခ် နာရီစင်ကြီးနားရောက်တော့ ဘဝတစ်ခုရဲ့ ကာလတစ်ခုမှာ တခဏတာ အရိပ်ခိုနားမယ့် စာတိုက်တန်းလမ်းမှ နာမည်ကြီးအဆောင် ဖြစ်လာမယ့် "ဒေါ်လှ အဆောင်" ရှေ့သို့ ဆိုက်ရောက်လာပါတော့တယ်။ အဆောင်ရှေ့ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အရင်ဆုံးအပြေးထွက်လာတဲ့သူက ကျွန်တော်တို့ နှိပ်စက်သမျှ ခံရရှာတော့မယ့် အကိုကြီး ကိုမြင့်ဇော်ပါပဲ။ ကိုမြင့်ဇော်က အဆောင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ သားအကြီးဆုံး သူတို့မိသားစု သုံးယောက်က အောက်ထပ်က အနောက်ဆုံးအခန်းမှာနေကြတယ်။ "ဒေါ်လှအဆောင်" လို့ အမည်တွင်ရခြင်းက ကိုမြင့်ဇော်ရဲ့ အဖွားဒေါ်လှရဲ့အိမ်ဖြစ်လို့ အမည်တွင်နေတာပါ။ အဖွားဒေါ်လှကတော့ ကွယ်လွန်သွားတာ ကြာခဲ့ပါပြီတဲ့။
အဆောင်လေးက နှစ်ထပ်အုတ်ညှပ်တိုက်ပါ။ အဆောင်ရှေ့ဘယ်ဖက်မှာ ဂျပန်ပိတောက်ပင်ကြီးတစ်ပင်၊ ညာဖက်ခြမ်းမှာ သရက်ပင်တစ်ပင်ရှိပါတယ်။ ဂမုန်းပန်းအိုးလေးတွေနဲ့ ခုံတန်းရှည်တစ်လုံးလည်း ချထားပါတယ်။ အဆောင်က အမျိုးသားသီးသန့်ဆောင်ပါ။ ပြည်မှာက ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ပြည်တက္ကသိုလ်၊ ဂျီတီစီ စသဖြင့်ရှိတဲ့အတွက် အဆောင်တွေရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို အရောင်နဲ့ ခွဲထားပါတယ်။ အများစုကတော့ ကိုယ့်ကျောင်းအရောင်တပ်ထားတဲ့ အဆောင်မှာပဲ နေကြတာများပါတယ်။ ရောနေကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ PTU အဆောင်တွေရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကတော့ အဝါရောင်နောက်ခံမှာ အဖြူရောင်နဲ့ စာလုံးရေးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဆောင်ကတော့ အဲဒီအချိန်ထိ ဆိုင်းဘုတ်မရှိသေးပါဘူး။
ပစ္စည်းတွေ အားလုံးချလိုက်ပြီးတော့ ကားသမားတွေရော ပြန်ရဦးမှာမို့ နေ့လည်စာထွက်စားကြပါတယ်။ မေရွက်ဝါထမင်းဆိုင်ပါ။ ပြန်လာကြတော့ အဆောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာပါတယ်။ စာတိုက်တန်းလမ်းက ကတ္တရာလမ်းပေမယ့် နေရာအတော်တော်များများ ပျက်နေပါပြီ။ အိမ်တွေက တိုက်ခံအိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် အစုံပါပဲ။ ဈေးဆိုင်လေးတွေလည်း အိမ်ရှေ့မှာ တည်ထားကြတယ်။ လိုက်ကြည့်မိတော့ တည်းခိုရိပ်သာ၊ ဘက်ထရီဆိုင်၊ သနပ်ခါးခဲလုပ်ငန်း၊ စာပုံနှိပ်စက်၊ ကွမ်းယာဆိုင်၊ စာအုပ်အငှားဆိုင် အမျိုးစုံလင်လှပါတယ်။ လမ်းမကြီးပေါ် မဟုတ်ပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးကို လှမ်းထွက်လိုက်ရုံနဲ့ ရောက်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာစရာအကောင်းဆုံးကတော့ ရွှေဆံတော်ဘုရားကြီးကို အဆောင်ရှေ့က လှမ်းဖူးနိုင်တာပါပဲ။ ညခင်းတွေတိုင်းမှာ အဆောင်ရှေ့က ခုံတန်းလေးမှာထိုင်ရင်း လေလေးတဖြူးဖြူးနဲ့ ရွှေရောင်တဝင်းဝင်း ရွှေဆံတော်ဘုရားကြီးကို ကြည်ညိုရတာ အင်မတန်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းလှပါတယ်။
အဲဒီညရောက်တော့ ရွှေဆံတော်ဘုရားပေါ် တက်ပြီး ရှိခိုးဦးခိုက်ကြပါတယ်။ ဘုရားပေါ်က ပြန်ဆင်းတော့ ညစာစားကြပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ချီတက်ကြတာပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်က အဆောင်နဲ့လည်း နီးတဲ့ "ပန်းနုရောင် ကဖီး" မှာသွားထိုင်ဖြစ်ကြတယ်။ ကိုယ်သောက်ချင်တာ ကိုယ်မှာကြတာပေါ့။ ခဏနေလို့ လက်ဖက်ရည်ခွက်တွေလည်း လာချရော ကြည့်လိုက်တော့ ဟာ......... ဘယ်လိုလဲဟ လက်ဖက်ရည်ကလဲ။ လက်ဖက်ရည်ခွက်တွေပေါ်မှာ စတီးပန်းကန်လေးနဲ့ နို့စိမ်းကိုထည့်ပေးထားတာ ကြိုက်ရင်ထည့်သောက်ပေါ့လေ။ ဒါနဲ့ပဲ လက်ဖက်ရည်သောက်ပြီး လေကန်ပြီး အဆောင်ပြန်အိပ်ကြတော့တယ်။ အဆောင်နေကျောင်းသားဘဝရဲ့ ပထမဦးဆုံးညပေါ့ဗျာ။
Posted by Taungoo at 9:52 PM comments (2)
၂၀၀၂ ခုနှစ် ဧပြီလဆန်းရဲ့ မှောင်မှောင်မည်းမည်း ညကျဲကျဲထဲမှာ ရန်ကုန်-မန္တလေး အဝေးပြေးလမ်းမကြီး တစ်လျှောက် ဒိုင်နာကားတစ်စီး အရှိန်အဟုန်ဖြင့် မောင်းလာနေသည်။ ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာတော့ သေတ္တာတွေနဲ့ စက်ဘီးတစ်ချို့ကို စီပြီး ကြိုးများဖြင့် ချည်နှောင်၍ တင်ဆောင်ထားသည်။ ကားနောက်ခန်း အတွင်းဖက်မှာတော့ သေတ္တာတွေကို တစ်ပြင်လုံးအပြည့်ခင်းထားပြီး အဲဒီအပေါ်မှာမှ အိပ်ယာထုပ်တွေကို ဖြည်ပြီး မွေ့ယာသဖွယ် ထိုင်လို့ရအောင် လုပ်ထားလေသည်။ အတွင်းထောင့်တစ်နေရာမှာ မြို့ပြ၊ ဗိသုကာနဲ့ စက်မှုသမားတွေရဲ့ လက်သုံးတော် T-square လေးငါးချောင်းကို စုချည်ထားရသေးသည်။ သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံး ခုန်ပေါက်နေတဲ့ကားပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းမအိပ်နိုင်ဘဲ ငိုက်မြည်းရင်းသာ ပါလာကြသည်။ ပဲခူးမရောက်ခင် ပျဉ်ပုံကြီးမှာ ကားခဏရပ်ပြီး နံနက်စာစားကြသည်။ ကားပြန်ထွက်တော့ အိပ်ချင်စိတ်မရှိကြတော့ပေမယ့် မှောင်နှင့်မည်းမည်းမို့ စကားသိပ်မပြောဖြစ်ကြဘဲ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်သာ အဝေးကိုငေးမောနေမိကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ တောင်ငူအဖွဲ့၏ တက္ကသီလာ ပြည်တော်သာသွား တောလားသည်ကား ဤသို့ပင် စတင်ခဲ့လေသည်။ ပထမနဲ့ ဒုတိယ နှစ်နှစ်ကို တောင်ငူကျောင်းတွင် အောင့်အီးမျိုသိပ် ကျိပ်မှိတ်တက်ခဲ့ရပြီးသကာလ တက္ကသိုလ်ဟူသော ကျောင်းတော်ကြီးနှင့် စတင်ထိတွေ့ရတော့မည့်အတွက် အားလုံးတက်ကြွရွှင်လန်းနေကြသည်။ ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် တတိယနှစ်ကို ဆက်လက်တက်ရောက်ရန် အကြောင်းကြားစာများ အသီးသီးရရှိကြပြီးနောက် ပြည်သို့မထွက်ခွာခင် တစ်ပတ်ခန့်အလိုကပင် စုရပ်ဖြစ်သော ကျွန်တော်၏အိမ်သို့ အားလုံးသော သူငယ်ချင်းထီး သူငယ်ချင်းမတို့၏ သေတ္တာ၊ အိပ်ရာလိပ်၊ စက်ဘီးပါမကျန် တိုတိုထွာထွာမှန်သမျှ အသီးသီး လာရောက်ပို့ထားကြလေရာ အိမ်ဘေးဂိုထောင်တွင် စုပုံနေတော့သည်။ မိန်းကလေးများက ပစ္စည်းကားနဲ့ မလိုက်ကြဘဲ Express ဖြင့် နောက်မှလိုက်လာကြမည်ဖြစ်သည်။ ညဦးပိုင်းထဲက သူငယ်ချင်းများအားလုံး အိမ်ရောက်နေကြပြီး ဒိုင်နာလာဆိုက်တော့ ကားပေါ်ဝိုင်းတင်ကြသည်။ ပစ္စည်းများအားလုံး ကားပေါ်တင်ပြီးလို့ မကြာခင်မှာဘဲ မောင်းလာကြလေသည်။ မြို့တွင်းမှ မထွက်ရသေးခင်မှာပဲ ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်းများက ဖွက်ယူလာခဲ့သော ဗျစ်ရည်သံဗူးတွေကို ထုတ်လေသည်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကားနောက်ခန်းထဲကို ဆိုင်ကယ်မီးရောင်တစ်ခု လှမ်းထိုးလိုက်သည်။ ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်အဖေ၊ နောက်မှာက ညီမလေး။ ဒီကောင်တွေ ဒါမျိုးကျတော့ လျင်သည်။ ဗူးတွေကို ဘယ်လိုသိမ်းလိုက်မှန်းမသိ။ အဖေက ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မောင်းလိုက်လာရင်းမှ ကားပေါ်သို့ မုန့်ထုပ်တွေ၊ နေကြာစေ့ထုပ်တွေ၊ သကြားလုံးထုပ်တွေ တစ်ထုပ်ပြီးတစ်ထုပ် ပစ်ပစ်တင်ပေးသည်ကို လုဖမ်းကြရင်း ဆူညံနေတော့သည်။ မြို့အထွက်ခပေါင်းတံတားရောက်မှ အဖေလက်ပြပြီး လှည့်ပြန်သွားတော့တယ်။ မြို့ပြင်လည်းအရောက် ဗျစ်ရည်ဗူးလည်း အဖောက်ပဲ။ အာလူးကြော်ပါ အမြည်းရသွားတာကိုး။
ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းပေါ် ရောက်တော့ အလင်းရောင်လည်း ကောင်းကောင်းရနေပြီဖြစ်တဲ့အပြင် လမ်းကလည်း အတော်ကောင်းတာမို့ "ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ရေ လူစုံပြီလားဟေ့" ဆိုလိုက်တာနဲ့ အထုပ်ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်က လုံးဝမကစားတတ်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘေးနားမှာ ဖဲမီးလှုံရင်း နားကြပ်ကက်ဆက်ကလေးနဲ့ ငြိမ့်နေလိုက်တယ်။ လက်ပံတန်းတာဆုံရောက်တော့ တခဏထပ်နားကြပြန်တယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ပူပူနွေးနွေး ဆီထမင်းရယ်၊ စာကလေးကြော်၊ ငါးကြော်တွေရယ်ကို အမျိုးစုံလို့ အထမ်းလေးတွေနဲ့ ရောင်းကြတာ။ ကျွန်တော်က ဖေဖော်ဝါရီ လလယ်လောက်ကတည်းက အဆောင်ရှာဖို့ ပြည်ကို တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးသားလေ။ လက်ပံတန်းက ဆီထမင်းနဲ့ စာကလေးကြော်ကို အဲဒီကတည်းက စွဲသွားလိုက်တာ နောက်ပိုင်းတောက်လျှောက် လက်ပံတန်းတာဆုံမှာ ကားနားတိုင်း အဲဒါပဲစားဖြစ်တော့တာ။ ကားတွေကတော့ ရောင်နီဦးမှာ ရပ်ကြတာများပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဆိုင်ထဲက အစာတွေထက် ဆီထမင်းနဲ့ စာကလေးကြော်ကိုပဲ ပိုမက်စက်ပါတယ်။ ဆီထမင်းနဲ့ စာကလေးကြော်တစ်ပွဲကို ပါဆယ်ဝယ်လိုက်ပြီး ရောင်နီဦးဆိုင်ထဲမှာ လက်ဖက်ရည်ပေါ့ဆိမ့်တစ်ခွက်နဲ့ဆို အင်မတန်စားလို့ မြိန်လိုက်တာ ခုတောင်စားချင်လာရောပဲ။
ကျွန်တော်က အဆောင်နေကျောင်းသား သိပ်ဖြစ်ချင်တာ။ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်ပြီးလို့ ကျွန်တော့်အမှတ်ပေါင်းက YIT ကို သေချာပေါက်ဝင်မှန်းသိတဲ့အချိန်မှာ ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ တိုင်လုံးရှည်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ အင်မတန်ခန့်ညားတဲ့ ရုရှကလာဆောက်ပေးထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ တက်ရတော့မယ်ပေ့ါလေ။ တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အကြောင်းတွေပါတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ဝတ္ထုတွေဖတ်ရတာ သိပ်အရသာရှိတာပဲ။ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေဆိုလည်း မလွတ်တမ်းပဲ။ YIT ကြို့ကုန်းကျောင်းနောက်ခံနဲ့ ကြည့်ခဲ့တဲ့ တစ်ကားဆိုရင် သိပ်သဘောကျတာ။ ဇာတ်ကားနာမည်တော့မေ့နေပြီ။ ဒွေးနာမည်က အဲဒီကားမှာ ခိုင်မြဲကျော်စွာတဲ့။ (နောက်ပိုင်းတော့ MIT မှာရိုက်တဲ့ “ချစ်ခြင်းရင်ခုန်ယုံကြည်စွာဖြင့်“ ကားလည်း ကြိုက်တာပဲ၊ ရှုခင်းတွေက ရန်ကင်းတောင်နောက်ခံနဲ့ အရမ်းလှတယ်)။ ဒီလိုနဲ့ တကယ်တမ်း ဝင်ခွင့်ခေါ်စာတွေကျလာတော့ သတင်းပို့ခိုင်းတဲ့နေရာက ....တစ်နေရာရယ်လေ။ ကျွန်တော် တမ်းတခဲ့သလို မဖြစ်လာခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော် အဆောင်သွားကြည့်တုန်းက ဆောင်းမကုန်သေးတော့ သိပ်မသိသာဘူး။ အသွားရောအပြန်ရော ညခင်းတွေလည်းဖြစ် လေအိတ်ကားနဲ့လည်းဖြစ်တော့ လမ်းတလျှောက် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း မမြင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုကျတော့ ရာသီဥတုကလည်းပူ ဘေးဘီကိုကြည့်တော့လည်း ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့နဲ့ဆိုတော့ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ပြည်မှာကျောင်းတက်ရမှာ ပူပူလောင်လောင်နဲ့ ပျင်းစရာကြီးပဲဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့အားလုံး စိတ်ပျက်သွားကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကတော့ အိမ်ထောင်စုအပြောင်းအရွှေ့တွေလုပ်ပြီး ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လှိုင်သာယာ) မှာတက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘဝကို ပြည်မှာတက်မှသာ အပြည့်အဝရမယ်လို့ (ကိုယ့်ဘာသာ) ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြည်ကိုပဲ ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ အဲ.. ဒီလိုနဲ့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ ပြည်မြို့နား တဖြည်းဖြည်း နီးလာတဲ့ တစ်နေရာအရောက်မှာတော့ ရုတ်တရက်.......
Posted by Taungoo at 8:52 PM comments (2)
ပီတီယူ + ဆေးကွေး= ?
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းဖြေပြီးတဲ့နှစ်မှာ အလယ်တန်းတုန်းက ဆရာမကြီးတစ်ဦးကွယ်လွန်ပါတယ်။ သဂြိုင်္လ်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကားနဲ့ အားလုံးစုပြီး လိုက်ပို့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျောင်းဖွင့်ရက်ဆိုတော့ ကျောင်းက ဆရာဆရာမတွေရော ကျောင်းသားတွေရော အများကြီးပေါ့။ တောင်ငူဆိုတာက စက်ဘီးလည်း အတော်စီးကြတာကလား။ စက်ဘီးနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကြားထဲမှာ သူလေးကို ကျွန်တော်လှမ်းတွေ့လိုက်တယ်။ အဖြူအစိမ်းလေးနဲ့ ခေါင်းမှာ ဖဲကြိုးအစိမ်းလေး နှစ်ဖက်စီးထားတယ်။ သူ့မျက်နှာလေးက အေးချမ်းပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး။ တခြားကောင်လေးတွေ လိုက်စနေလို့ သူလေးခမျာ စက်ဘီးကို အမြန်နင်းထွက်ရအောင်လည်း လူတွေက ကြပ်ကြပ်ဖြစ်နေတာမို့ ရှက်လည်းရှက် စိတ်လည်းရှုပ်နေတဲ့ အဲဒီနေ့က သူလေးရဲ့မျက်နှာလေးဟာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲကို နတ်သျှင်နောင်ကလောင်သွား စွဲစိုက်ထားလိုက်သလိုပါပဲ။
တကယ်တော့ သူလေးက ကျွန်တော့်ဘကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးဖက်က မြေးဝမ်းကွဲတော်ပါတယ်။ ဝါစဉ်အရကြံဖန်ကြည့်ရင်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ဆို တူမပေါ့လေ။ တောင်ငူရာဇဝင်နဲ့ ပြောင်းပြန်ဗျ။ ရာဇဝင်မှာက အဒေါ်နဲ့တူလေ။ ရာဇဓါတုကလျာက နတ်သျှင်နောင်ရဲ့ အဒေါ်တော်တာကိုး။ သူလေးကို ငယ်ငယ်တည်းက မြင်ဖူးပြီးသား သိပြီးသားပါ။ သူလေးတို့ အမျိုးတွေကလည်း အိမ်နားတင်နေကြတာလေ။ သူလေးလာလည်တဲ့အခါ မြင်ဖူးတာပေါ့။ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးမှန်းတော့ သိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ထက်မပိုခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီနေ့ကမှ အဲဒီနေ့ကပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ သူဆယ်တန်းနှစ်ထိ ကျွန်တော်လည်း တောင်ငူမှာ ကျောင်းတက်နေရတုန်းပဲဗျ။ (၉၆ ၉၇ ၉၈ ဆယ်တန်းအောင်သမားတွေအတွက် YTUဆိုတာက ပထမနဲ့ ဒုတိယနှစ်တွေကို နီးစပ်ရာ ဂျီတီအိုင်ကျောင်းတွေမှာ တက်ခဲ့ရပါတယ်)။ အဲဒီတော့ ဘာလုပ်သလဲဆိုရင် သူလေးကျူရှင်ချိန်တချို့ကို သွားသွားချောင်းပါတယ်။ အဲ တစ်ခုကျန်သေးတယ်။ ကျွန်တော့်ညီမဝမ်းကွဲက သူလေးနဲ့ အင်မတန်ခင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေ။ အဲဒါဟာ ကျွန်တော်ဖို့ အဆင်ပြေမလိုနဲ့ မထူးခဲ့ပါဘူး။ ညီမလုပ်တဲ့သူက အောင်သွယ်လုပ်ဖို့မပြောနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ သတင်းလေးတွေတောင် ပေးဖော်မရဘူး။ သချာင်္ချိန်ဆို ဆရာမက ကျွန်တော်တို့ဆရာမပဲဆိုတော့ အေးဆေးပဲ။ ဆရာမပဲ သတိရလို့ လာလည်သလိုလိုနဲ့ သူလေးကို ချော်လဲရောထိုင် သွားငမ်းတာပါ။ သူလေးက သိပ်လှတော့ အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝကတည်းက လိုက်တဲ့ကောင်တွေ အတော်များပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာမှမကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကျူရှင်ရယ် သူ့အိမ်ရယ်ကိုပဲ မသိမသာ သွားပတ်ပါတယ်။ သူလေးက စာအရမ်းတော်တယ်။ သွားပြီးစိတ်ကစားအောင်လုပ်ရင် ဆေးကျောင်းမဝင်မှာ ချွတ်ချော်သွားမှာ ကျွန်တော်မလိုလားပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဝေးမှသာပေါ့ဗျာ။
အောင်စာရင်းတွေထွက်တော့ ဂုဏ်ထူးလေးဘာသာရပြီး မကွေးဆေးကျောင်းရောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိပ်ပျော်တာပေါ့။ သူမကွေးစတက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ တက်နေပြီလေ။ မကွေးသားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့အမက သူလေးတို့ဆေးကျောင်းက ပထမနှစ်သင်တဲ့ ဆရာမတဲ့။ သူ့သတင်းလေးတွေ နည်းနည်းပါးပါးကြားရသေးတယ်။ နောက်နှစ်တွေကြတော့ ဘယ်ရမလဲ တောင်ငူသားပဲဟာ မကွေးဆေးကျောင်းက ညီငယ်တွေဆီကနေ သတင်းတွေ အမြဲရတယ်။ သူလေး Miss Glory အဖြစ်အရွေးခံရတဲ့အကြောင်း ဆံပင်တွေရှည်ပြီး နည်းနည်းပိန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း လိုက်တဲ့သူအရမ်းများပေမယ့် ခုထိဘယ်သူ့ကိုမှ(ဘယ်သူနဲ့မှ) ပြန်မကြိုက်သေးတဲ့အကြောင်း အစုံပါပဲ။
ကျောင်းတံဆိပ်စာအိတ်မရောင်းတဲ့အတွက် ကျောင်းလိုဂိုကို အေဖိုးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲ စာအိတ်ချိုးထားပါတယ်။ မကွေးဆေးက သူလေးဆီကို ပို့ဖို့ပါ။ ကျွန်တော့်စာအိတ်ကို မြင်ဖူးလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့လည်းလိုချင်လို့ မိတ္တူဆွဲယူချင်တာကို ညစ်ပြီး မပေးခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ သူလေးအတွက် သီးသန့်လေးဖြစ်ချင်တာပါ။ ကျွန်တော်က လူသာမရောက်ပေမယ့် ပြည်ကနေ သူလေးဆီကို မွေးနေ့ကတ်တွေ ချစ်သူများနေ့ကတ်တွေ အခွင့်သင့်တိုင်းပို့တယ်။ ဘာပို့ပို့ အမြဲပါတာကတော့ အသည်းပုံကတ်ပြားလေးတွေပါပဲ။ ဗူးလိုက်ကို ဝယ်ထားတာပါ။ စာပို့တိုင်း စာတိုက်က စာရေးမတွေ အမြဲမေးလေ့ရှိတာတစ်ခုက စာရောပါရဲ့လားဆိုတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်စာအိတ်က ပေါ့ပါး ပြားချပ်ပြီး အထဲမှာက များသောအားဖြင့် အသဲပုံကတ်လေးတစ်ခုထဲပဲပါတာကိုး။ လုပ်ပုံကို ပြောပါတယ်။ မလှမွန်(ရေနံ့သာ) ရေးတဲ့ “မိန်းမတို့၏ ကောင်းမြတ်သော စံလက္ခဏာများ"ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းပို့ဖူးတယ်။
အဲဒါလေးတွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ PTUဆိုတဲ့ကျောင်းကြီးကနေ မကွေးဆေးကို မကြာမကြာ ရောက်လာလေ့ရှိတဲ့ လက်ဖြစ်စာအိတ်လေးတွေနဲ့ ကတ်ပြားလေးတွေကို သူလေးသတိထားမိနေခြင်းပါပဲ။ အဲဒါကတော့ ညီငယ်တွေ ပြန်ပြောပြလို့ သိရတာပါ။ ပို့တဲ့သူဟာ ကျွန်တော်မှန်းလည်း သိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျောင်းက အပျော်ခရီးတွေထွက်တော့ အပြန်မှာ မကွေးကို ဝင်လည်ကြပါတယ်။ မကွေးသား သူငယ်ချင်းက သူနဲ့ဆင်းနေခဲ့ပြီး သူလေးဆီလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ အတန်တန်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က နောက်တစ်နေ့မှာ ဒီအပတ်အတွက်လာသင်တဲ့ဆရာမရဲ့ နောက်ဆုံး lectureချိန်လေးရှိတာမို့ နေခဲ့ချင်ပေမယ့် ပြန်လိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာအပိုင် မရှိတဲ့ PTU ကျောင်းသားဘဝရဲ့ အဖြစ်တစ်ခုပေါ့ဗျာ။
တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေက ပြည်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျွန်တော် တောင်ငူပြန်တဲ့အခါ မကွေးမှာကျောင်းတက်နေတဲ့ သူလေးဟာလည်း တောင်ငူပြန်တဲ့အချိန်နဲ့ သွားတိုက်ဆိုင်နေတတ်တယ်။ သုံးကြိမ်လောက် အဲဒီလိုဆုံပါတယ်။ လူချင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူလေးပြန်လာတာကို အားမကိုးရတဲ့ ညီမဆီက သိတာပါ။ သူ့ဆီလာလည်ပါသတဲ့။ ကျွန်တော် စွမ်းသလောက်တော့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူလေးလည်း ပြန်ရောက်နေတယ် ကြားတိုင်း ချက်ချင်းဆိုင်ကယ်ထုတ် သူလေးအိမ်ရှေ့ မျက်စိနောက်လောက်အောင် ပတ်မောင်းနေတော့တာပဲ။ မတွေ့ပါဘူးဗျာ တစ်ခါမှ။ အမြဲတမ်း မဆုံနိုင်အောင် ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကများ ဖန်တီးနေလဲ မသိပါဘူး။
ဒီကို မထွက်လာခင်ကတော့ သတင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ကောလဟလမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အမှန်ကြီးပါ။ တောင်ငူက စီနီယာဆေးကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်နဲ့တဲ့လေ.......။ အဲဒါပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ တစ်လျှောက်လုံး သူလေးသာ လွှမ်းမိုးထားခဲ့လို့ ဂျီဟောသူမဟုတ်သော (လက်ခုပ်ပင်သူ၊ နှောကုန်းသူ) ကျောင်းသူမလေးများကို စိတ်မဝင်စားခဲ့မိပါ။ သြော်..တစ်ခုကျန်သေးတယ်ဗျ။ သူလေးကို ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရတာ ၂၀၀၁ မတ်လရဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲရက်တစ်ရက်မှာပါ။ ခုချိန်ထိပဲ ဆိုပါတော့။ ခုနစ်နှစ်ရှိပါပြီ။ အချိန်တွေ အကြာကြီး မမြင်မတွေ့ရပဲ စွဲလန်းနေခဲ့တာကို ရူးတယ်လို့ဆိုကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရူးခဲ့တာပေါ့။ တကယ်တော့ စိတ်သာဆောင်လေတယ် လူကမနှောင်ခဲ့လေတော့ အလွမ်းမင်းသားကြီး ကျွန်တော့်ခမျာ နောက်ဆုံးတော့လည်း ကျန်ရစ်သားလေး ဖြစ်ရပြန်ပြီပေါ့ဗျာ။
အောက်က သီချင်းဟာ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲ ပေါက်သွားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ "(ဦး)ကိုကျော်သန်းက သိတယ်" သီချင်းပါ။ ပဉ္စမနှစ်မှာ တစ်ကြိမ်သာ အပျော်ရေးထုတ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် "တစ်တို့ (onetouch) ဂျာနယ်" မှာ ထည့်ရေးခဲ့တာပါ။ ဆရာဦးကျော်ကျော်သန်းမှာ အလွန်သဘောကောင်းသော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူဆိုးထိန်း (မော်ကွန်းထိန်း) ဖြစ်ပါသည်။ "တောင်ပြာတန်းက သိတယ်" သီချင်းကို စာသားတစ်ချို့ ပြင်စပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပီတီယူကျောင်းသားဘဝဟာ... ချစ်သူကို လွမ်းဖို့ရာ
တစ်ခါတစ်လေ... အချိန်တော့ မပေးနိုင်ပါ
ဆပ်ပလီ ကိုကျော်ကာဖြတ်ဖို့.......... အတန်းတွေမှန်မှန်တက်လို့
ဒါတွေကို (ဦး)ကိုကျော်သန်းက ..... အသိဆုံးပါမေရယ်
ဒါပေမယ့်... ပြည်မြို့ရောက်နေ ချစ်သူမှာလေ
Posted by Taungoo at 12:46 AM comments (10)